Diyaarad uu saaran yahay Sheekh Mukhtaar Roobow oo kasoo degtay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Diyaarad uu saaran yahay Sheekh Mukhtaar Roobow oo kasoo degtay magaalada Muqdisho
Waxaa maanta garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kasoo degtay diyaarad gaar ah oo waday Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur, kadib markii ay kasoo kicitantay garoonka magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo uu wehlinayay wiil uu dhalay ayaa waxaa sidoo kale la socday wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo taliye ku-xigeenka hay’adda nabad-sugidda Qaranka ee NISA.
Ammaanka Sheekh Mukhtaar Roobow ayaa la sheegayaa inay islamarkiiba la wareegeen ciidamada sirdoonka Soomaaliya ee NISA, isagoona markii dambe loo galbiyay xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur uu kullamo la yeesho mas’uuliyiinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, shirar isdaba joog ah ayaa haatan ka socda xafiisyadda madaxweynaha Soomaaliya iyo ra’iisal wasaaraha, kaas oo looga hadlaayo sida rasmiga ah ee laga yeelayo arrinta Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur.